Xirmooyinka jawiga wax laga beddelay (MAP) - Utien Pack Co ,. Ltd.
Mashiinka wax lagu rakibo ee Thermoform
Mashiinka baakadka adag ee Thermoform
Mashiinka baakadka maqaarka ee Thermoform
Qalabaynta Semi-otomaatig-ga ah
Khatimidii saxaarad toos ah oo isdaba-joog ah
Mashiinnada Vacuum Double Chamber
Mashiinnada Vacuum Chamber-ka ee Waaweyn
Mashiinka Mashiinka Vacuum-ka
Mashiinnada Vacuum Desktop
Mashiinnada Vacuum Dibadda ah
Mashiinnada Vacuum-ka Golaha Wasiirada
Cadaadi mashiinka baakadaha
Khatimidii tuubbada Xiinka
Cunto ku habboonaanta
Hilibka la warshadeeyay
Baakadaha aan cuntada ahayn
Waxyaabaha Xayawaanka ah
Xirmooyinka jawiga la beddelay (MAP)
Ku saabsan UTIENPACK
Ku beddel gaaska dabiiciga ah ee ku jira xirmada gaaska gaarka ah ee sheyga. Inta badan waxaa jira labo nooc oo baakadaha jawiga wax laga beddelay ee youtianyuan: thermoforming oo wax laga beddelay jawiga baakadka iyo sanduuqa horay loogu diyaariyey ee wax laga beddeley baakadka.
Baakadaha jawiga la beddelay (MAP)
Baakadaha jawiga ee wax laga beddelay caadi ahaan waa in la ilaaliyo qaabka, midabka iyo u ekaanta waxyaabaha. Gaaska dabiiciga ah ee ku jira xirmada waxaa lagu beddelay isku dhaf gaas oo ku habboon badeecada, taas oo inta badan ka kooban kaarboon dioxide, nitrogen iyo oksijiin.
Baakadaha MAP ee Thermoforming
Tran Sealing ee MAP
Waxaa loo isticmaali karaa baakadaha hilibka ceyriin / karsan, digaagga, kalluunka, miraha iyo khudaarta ama cuntada karsan sida rootiga, keega iyo bariiska la duubay. Waxay sifiican u ilaalin kartaa dhadhanka asalka ah, midabka iyo qaabka cuntada, waxayna gaari kartaa mudo dheer oo ilaalin ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu rakibo waxoogaa caafimaad iyo farsamo ah.
Baakadaha jawiga ee wax laga beddelay waxay dheereyn karaan nolosha alaabta iyada oo aan la isticmaalin waxyaabaha lagu daro cuntada. Oo waxay ka ciyaari kartaa door ilaalin ah geeddi-socodka gaadiidka wax soo saarka si looga hortago cilladaha wax soo saarka. Alaabada warshadaha, baakadaha jawiga ee wax laga beddelay ayaa loo isticmaali karaa in looga hortago daxalka. Warshadaha caafimaadka, baakadaha jawiga wax laga badalay waxay ku ilaalin karaan alaabada caafimaadka baahiyaha baakadaha sare.
Mashiinnada baakadaha ee alaabada wax lagu duubo ee ana
Labada mashiinka baakadaha filimka fidiya ee thermoforming iyo mashiinka baakadaha sanduuqa preformed ayaa loo isticmaali karaa baakadaha jawiga la beddelay Mashiinka baakadka sanduuqa horay loo hagaajiyay wuxuu u baahan yahay inuu isticmaalo sanduuqa side preform side, halka mashiinka baakadaha ee thermoforming ay tahay inuu sameeyo habab kale sida buuxinta, shaabadaynta iyo wixii la mid ah ka dib markii uu fidinayo filimka duuban ee internetka. Qaabka alaabta la dhammeeyey ka dib markii wax laga beddelay baakadaha jawiga ayaa badanaa ah sanduuq ama boorso.
Mashiinka wax lagu duubo ee Thermoforming ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, sida bixinta adkaha, daabacaadda astaanta, godka jillaab iyo qaabeynta qaabdhismeedka kale ee shaqada, si kor loogu qaado xasilloonida baakadaha iyo wacyiga sumadda.
Mashiinka Baakadka adag ee Thermoforming
Tilmaame-siiye otomaatig ah oo isdaba-joog ah
255 Shuguang Wadada, Aaga Warshadaha Kebei, Shaoxing, 312081, Shiinaha